Sida si ammaan ah loogu isticmaalo shabakadaha bulshada - Ragga leh Style | Ragga Stylish
Sida loogu isticmaalo shabakadaha bulshada si badbaado leh
U adeegso shabakadaha bulshada si ammaan ah, adigoon ka walwalin inaad sababi karto murugo nafsi ah, waa wax maanta walwal ku haya bulshadeena. Waxaan xoojineynaa horumarinta tiknoolajiyadaan iyada oo loo marayo shabakadaha bulshada ee arrin walaac leh, gaar ahaan carruurta iyo dhalinyarada, maadaama ay yihiin qodobbada ugu muhiimsan ka hor istaag inay yeeshaan fal garasho-dabeecad leh wadar caadi ah.
Adiga oo aan horey u sii socon, tani kuma eka carruurta oo keliya, laakiin dad badan oo da 'weyn ayaa horayba u jiray waxay kordhinayaan balwaddooda iyagoo adeegsanaya shabakadaha bulshada iyo iyada oo aan la ilaalin hab aamin ah oo wax loo qabto. Tani wuxuu abuuraa balwad, ku tiirsanaan iyo culeys, dhammaan fududaanta faahfaahinta ee xidid u ah baahida koowaad.
1 Shabakadaha bulshada
2 Goorma ayaa loo soo wariyaa "balwad"?
3 Muxuu ka dhex kicinayaa dhexdeenna?
4 Tabaha looga gudbo qabatinka warbaahinta bulshada:
Markii aan ka hadlayno shabakadaha bulshada, barnaamijyada sida Facebook, Twitter, Instagram ama WhatsApp ayaa maskaxda ku soo dhaca. Dhammaantood waa la isticmaalaa iyadoo loo adeegsanayo isdhexgalka dadka aqoonta u leh ama u dhexeeya bulshooyinka iyo kooxaha aan la aqoon.
Qiyaastii 50% dadka adduunka ayaa adeegsada warbaahintaas sidaa darteedna xiriirkoodu waa maalinle. Waa in la ogaadaa in adeegsiga noocan ah ay muhiim tahay in wax lagu baro isticmaalka saxda ah maaddaama ay qaan-gaar yihiin, laakiin in badan oo ka mid ah ma aysan helin edbintaas iyada oo ay ugu wacan tahay hirgelinta degdegga ah ee nidaamkeenna.
Goorma ayaa loo soo wariyaa "balwad"?
Waxaa laga yaabaa inaan laga yaabo ama aan si fiican uga faa'iideysanaynin maarayntiisa, Kaliya waa inaad taqaanaa sida loo qiimeeyo goorta maandooriyaha uu na sababi karo in mustaqbalka fog uusan fiicnaan karin, falanqee halka ay balwadaha joogaan:
Haddii waxa ugu horeeya ee aad sameyso markaad toosto waa inaad ka hubiso shabakadahaaga bulshada wararka.
Waxaad joogtaa khadka intarneedka maalinta intiisa badan. Ficilladani waxay kuu horseedaan inaad si joogto ah u cusbooneysiiso astaantaada, aad dadka kula fal-gasho farriimo ama ficillo qoraal ah, daabacaadda iyo sawir-qaadista wax kasta oo kugu dhaca, oo ay ku jiraan waxa hareerahaaga ka dhacaya.
Waxaad had iyo jeer u fiirsataa nolosha dadka kale oo aad isbarbar dhigtaa naftaada, iyagoo u maleynaya inaysan qancin. Waxaad gelisaa "Waan jeclahay" waxkastoo waxaadna firfircoontahay waxkastoo la daabacayo.
Waad niyad jabi kartaa haddii kale waxaad helaysaa inaad kali kali ku noqoto dareenka waxaad wadaagayso.
Haddii aadan gacanta ku haynin meesha taleefankaagu yaalo ama aad ilowdo, Waxay kuu keeni kartaa walaac weyn ama walwal.
Muxuu ka dhex kicinayaa dhexdeenna?
Wax kasta oo aan hoos ku faahfaahinayno si guud ayey u soo tebinayaan "balwad", taas oo saameyn ku yeelan karta yaree waqtiga howlahaaga caadiga ah, sida inaad waqti yar la qaadato qoyskaaga iyo asxaabtaada, inaad yareyso howl maalmeedkaaga sida cunista, hurdada ama waajibaadka saaran qoyskaaga.
Maskax ahaan u dhuux shaqada saxda ah iyo tan caadiga ah qof maalintiisa caadiga ah gudahood. Xadgudubka shabakadahaas bulshada waxay soo saari karaan go'doomin iyo xiisaha wax kasta oo hareerahaaga ah, waxay xitaa sababi kartaa xanaaq, qaab nololeed deggan ama hurdo xumo.
Xaqiiqda kale waxay saameyn ku yeelan kartaa qaangaarka inbadan, laakiin waxay u horseedi kartaa wacdinta nuglaanta u sinnaanta qof kasta: waxay saameyn ku yeelan kartaa a cidhiidhi xagga shucuurta ah abuur oo kicin dabacsanaanta falalkooda, oo xitaa way kari kartaa niyad jabka dadka, adigoon awoodin inaad sifiican u wajahdo ama aad uxariso waxyaabaha neceb ama shucuurta adag.
Waxaa jira munaasabado gaar ah oo xaalado kala duwan leh, ku tiirsanaantan lagu riixayo xadka, ee dadku ku jiraan Waxaa loo kaxeeyaa inay noqdaan kuwo xishood xad dhaaf ah leh hoos u dhigista qaddarintooda. Ma haystaan ​​nolol bulsheed ama mid qoys oo sax ah, sidaa darteed la'aanta noocan ah Waxay doorbidaa qaybaha murugada.
Tabaha looga gudbo qabatinka warbaahinta bulshada:
Waa inaad raadisaa nooc ka mid ah waxqabadka inta badan ku mashquulsan waqtigaaga firaaqada. Qorshee daqiiqadahaas marka aad bilaabi doontid inaad ka madax bannaanaato taleefanka gacanta.
Mabda 'ahaan taleefankaaga naso, Meel aadan si fudud uga heli karin. Waad sii wadi kartaa adeegsiga si aad u sameysid ama u heshid wicitaano, laakiin waxa ugu weyni waa inaanad xidhiidh la yeelan internetka.
Qeybtaan kale way adagtahay, laakiin waad awoodaa ka bax barnaamijyo badan si aad uga fogaato helitaanka ogeysiisyada ama gariir, ama ugu yaraan isku day inaad aamusiso.
Waa inaad Raadi wakhtiyo hakad geliya ballanqaadka ka warqabka mobilka, iyo in waqtiyadan ay sii kordhayaan. Qofna ma dhahayo waa inaadan dib ula xiriirin shabakadaha, laakiin waa inaad iska ilaalisaa inaad raacdo isla nidaamkii hore.
Haddii ay lagama maarmaan tahay in lala xiriiro shabakadahaaga xilliyada qaarkood, kuma tiirsanaan inaad ka warqabto astaantaada, ama cusbooneysiinta sawirrada, ama kaqeybqaadashada si joogto ah ficillada oo dhan.
Ku mashquul waqtigaaga raadinta filimaan ama taxane telefishanka, la kulan saaxiibbadaa, akhriso, jimicsi sameyso, qalab garaac ama xitaa sameyso liistada dhammaan dhaqdhaqaaqyada kugu dhiirrigalin kara, Waan hubaa in wax wanaagsan oo heer shakhsiyadeed ah aad ka heli karto waayo-aragnimadan cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Sida loogu isticmaalo shabakadaha bulshada si badbaado leh
Sida loo sameeyo menu caafimaad leh usbuuca oo dhan
Sida loo yeesho timo jilicsan